Meeqa sano ayaa lagu qaan gaadhaa? Goor maase la guursan karaa? – Maandoon
Meeqa sano ayaa lagu qaan gaadhaa? Goor maase la guursan karaa?
August 13, 2018 Abdalla Aw Hassan
Qaan gaarnimadu waa mid jismiga ah sida in qofku gaadho waqti uu wax dhali karo iyo mid caqliga ah sida in qofku gaadho waqti uu go’aan qaadan karo. Labadabana waxaa shardiya in qofku awood buuxda leeyahay waqtiga uu wax dhalayo ama uu go’aan qaadanayo, sida Alle yiri: “Ha u dhowaanina maalka agoonka ilaa uu ka xoogaysto markii laga reebo wixi bannaan in si xaq ah lagu cuno/ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده” (suuradda al-Ancaam: 152).
Shuruudaha guurka waxaa ka mida in labada qof mid waliba wax dhali karo sidaa darteed ma bannaana in la guursado qof aan wax dhali karin, qofkii qaan gaadh ahna ma bannaana inuu wax dhalid bilaabo isaga oo ka yar 15 sano, maxaa yeelay waxaa dhiman shardiga ah in qofku jismi ahaan awood u leeyahay inuu wax dhalo, waana midda keentay in gabdhaha yar yari umul-raacaan marka ay dhalaan ama jugi gaadho habeenka u horraysa ee la arooso ka dibna ay dhintaan ama silcaan.
Marka uu qofku awood u yeesho inuu wax dhali karana waxay u kala baxdaa muddo ku habboon iyo mid aan ku habboonayn, midda aan ku habboonayn waa inta u dhaxaysa 15-20 iyo marka uu qofku dhaafo 40 sano, midda ku habboonna waa inta u dhaxaysa 20-40 sano, sida Alle yiri: ” Inta uu caloosha ku jiro iyo muddada laga joojiyo nuujinta waa 30bil, ilaa uu ka xoogaysto kana gaaro 40sano… uuna yiraahdo Allow ii hagaaji durriyadayda/… وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة … وأصلح لي في ذرِّيتي” “al-Axqaaf: 15).
Aayaddaani waxay xaddiday muddada ka horraysa guurka, waqtiga uu guurku ka bilawdo oo ah marka uu qaan gaaro xooggiisuna buuxsamo iyo waqtiga ku habboon inuu joojiyo wax dhalidda, maxaa yeelay inuu ku ducaystay marki uu 40 gaaray in alle u hagaajiyo carruurtiisa waxay calaamad u tahay inuu dhalay wixii awlaada ee la rabey inuu dhalo oo dhan, in la is raaciyey muddada uuna qaan gaarin iyo midda uu qaan gaaray laakiin uuna xoogaysanna waxay calaamad u tahay inay jirto muddo qofku qaan gaadhay laakiin ayna bannaanayn in loo guuriyo.
Wax dhalidda iyo in qofku masuuliyad qaadi karana ma aha laba arrin oo isku xiran mar walba. Maxaa yeelay qofkii wax dhali kara ama shaqayn kara waxaa wakiil ka noqonaya ehelkiisa ama ciddii masuul ka ah haddi uuna lahayn caqli ku filan sidaa darteed daruuri maaha in lala sugo sannad xaddidan sida 18, 20 iwm.
Laakiin wixi caqli ku xiran sida in qofka maalkiisa lagu wareejiyo ama inuu darawal noqdo iwm waxaa qofka loo dhiibi karaa waqtigii uu awood buuxda u yeesho oo keliya, dadkuna isku aqoon iyo isku akhlaaq ma noqon karaan sidaa darteed waxaa habboon in qof walba loo qiimeeyo waqtiga uu masuul noqon karo sida 16, 18, 20 sano iwm. Haddii cidda wax qiimaynaysaa ay tahay waalid sida Alle yiri; “intixaama agoonta ilaa inta ay ka gaaraan waqtiga guuurka, haddii aad ka heshaaan hanuunna u dhiiba maalkooda/ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا االنكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم” (al-Nisaa: 6).
Haddiise cidda wax qiimaynaysaa ay tahay dawlad waxay wax ku qiimayn kartaa inay wax ku dhisto sida qaalibka ama dhexdhexaadka ah, maadaama ay maamulayso dad aad u badan oo ayna suragal ahayn inay hal hal u qiimayso, taasoo daruuri ka dhigaysa in qaan gaadhnimada xagga jismiga ah iyo tan xagga caqliga ah isku waqti laga dhigo sida qaalibka ah, 15-20 na waxaa dhexdhaxaad u ah 18. Sidaa darteed dawladaha wax ku dhisay 18 waxay asiibeen sida ugu saxsan, wixii cilmi ah ama xikmad ahna cid walba waa laga qaadan karaa innaga oo og in waxa la xaddidey uu yahay wax bannaaan ee uuna ahayn wax laasim ah. Sidaa darteed ciddii ka dhigata 17 ama 19 way u bannaaan tahay.
Laakiin waxaa fiican in dastuurka lagu qoro in qofku ku guursan karo 18 iyo wixii ka badan sida qaalibka ah, maxaa yeelay waxaa jira xaalado khaasa sida inay jiri karaan gabdho gaadhay 15 sano ama ka badan oo aan haysan fursad shaqo iyo mid tacliin midna dawladduna ayna kafaalo qaadi Karin, laakiin waa in loo shardiyo ninkii ku guursanaya 18 ka hor inuu haysto maal fiican, inuuna ka dhalin wax ka badan 3cunug, inuu dhasha kala fogeeyo iyo inuuna u diidin wax barashada.
Meelaha ay ku badan tahay guurka gabdhaha yar yari waa meelaha ay tacliinta iyo noloshu hoosayso sida qaalibka ah sida tuulooyinka, baadiyaha, beeralayda iyo xaafadaha ay dan yartu degto iwm. Sidaa darteed wixii qawaaniin ah ee la soo saaro waxay waxtar yeelan karaan hadidi dadka wacyigooda iyo noloshooda kor loo qaado.
Ma la guursan karaa gabadh aan qaan gaadhin?
Waxaan soo marnay in nikaaxu waqti leeyahay iyo weliba inuu jiro waqti qofku qaan gaadhay oo ayna bannaanayn in loo guuriyo, sidaa darteed ma jirto aayad bannaysay guurka qof yar.
Aayadda laga fahmay in dumarku tirsadaan 3bil haddii aan caado ku dhicinna waxay khaas ku tahay gabdhaha qaan gaadhka ah maxaa yeelay ciddo waxaa tirsada dumarka laga rajaynayo inay uur yeelan karaan oo keliya.
Midda 2aad, ciddo waxaa tirsata gabadh la furay iyo mid nin u tegey iyada oo aan loo meherin sidaa darteed gabar kasta oo la yiri ciddo ha tirsato macnaheedu maaha in guurkeeda la banneeyey.
Sidoo kale ma jiro wax xadiis nebi ah oo faraya in la guursan karo gabar aan qaan gaadhin markii laga reebo qiso loo tiiriyey Caa’isho, qisadaas oo leh cillado badan sida inaan xugun lagu dhisi karin wixii qofka soo maray isaga oo aan qaan gaadhin, inaan la cadadyn inay caado heshay iyo jismi ahaan inta ay le’ekayd, iyo in qisadu khilaafayso aayadaha tilmaamay da’da guurka.
← Horta koobka bannayso!
Muxuu ahaa magacii nebiga loogu walqalay? →
Horta koobka bannayso!
July 31, 2018 Cabdi Ismaaciil Comments Off on Horta koobka bannayso!